गोपनीयता नीति - टुकी दिन
https://www.funneloftheday.com/ आफ्नो गोपनीयता गम्भीरतापूर्वक लिन्छ. यस गोपनीयता नीति व्यक्तिगत जानकारी सङ्कलन के हामी वर्णन र हामी यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने. सामान्य मा थप बारे गोपनीयता नीति सिक्न यस गोपनीयता नीति प्राइमर हेर्नुहोस्.
तालिका सूचना संग्रह
सबै वेब सर्भर आफ्नो आगंतुकों बारेमा आधारभूत जानकारी ट्र्याक. यो जानकारी समावेश, तर सीमित छैन, IP ठेगाना, ब्राउजर विवरण, टाइमस्ट्याम्पहरू र सङ्केत पृष्ठ. यो जानकारी कुनै पनि व्यक्तिगत यो साइटमा विशिष्ट आगंतुकों पहिचान गर्न सक्छन्. जानकारी तालिका प्रशासन र मर्मतका उद्देश्यका लागि ट्र्याक छ.
जहाँ आवश्यक, https://www.funneloftheday.com/ अनुकूलित सामग्री संग आगन्तुक राम्रो आगन्तुक सेवा र / वा प्रस्तुत गर्न एक आगन्तुक गरेको प्राथमिकता र इतिहास बारे जानकारी भण्डारण गर्न कुकीहरू प्रयोग.
तपाईंको गोपनीयता नियन्त्रण
तपाईं गोपनीयता चासो छ भने कुकीहरू असक्षम गर्न आफ्नो ब्राउजर सेटिङ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ. सबै साइटहरु लागि कुकीहरू असक्षम यसलाई केही साइटहरु प्रयोग हस्तक्षेप गर्न सक्छ रूपमा सिफारिस गरिएको छैन. सबै भन्दा राम्रो विकल्प अक्षम वा प्रति-साइट आधार कुकीहरू सक्षम छ. कसरी कुकीहरू ब्लक गर्न निर्देशन र अन्य ट्रयाकिङ तंत्र लागि आफ्नो ब्राउजर कागजात. वेब ब्राउजर गोपनीयता व्यवस्थापन लिंक को यो सूची पनि उपयोगी हुन सक्छ.
चिन्ता वा प्रश्नहरू यस गोपनीयता नीति बारे थप स्पष्टीकरण लागि [email protected] निर्देशित गर्न सकिन्छ.